Iyo yakanakisa Android & iPhone Mapurogiramu emafoni, mahwendefa, iPads
Kana iwe uchitsvaga iyo tsva nhau uye wongororo pa akanakisa mapurogiramu efoni yako kana piritsi, ipapo wasvika panzvimbo chaipo. Pano paForo KD, isu tinokuchengeta iwe-ku-date pane ese azvino kuburitswa kweapp uye tinokupa maonero edu echokwadi ekuti ndeapi akakodzera nguva yako. Kunyangwe iwe uri iOS kana Android mushandisi, takakufukidza. Saka tarisa kumashure kazhinji kune ese azvino app nhau uye wongororo!
Mamwe maapplication akagadzirirwa kuita kuti hupenyu huve nyore, nepo mamwe akagadzirirwa kuvaraidza kana kuzivisa. Kazhinji, maapplication anogona kuve maturusi anobatsira anobatsira vanhu kubata hupenyu hwavo munzira dzakasiyana siyana.
Vanogona kuita kuti hupenyu hwedu huve nyore uye hunoshanda, nekutipa ruzivo uye maturusi atinoda patinenge tiri munzira. Vanogonawo kutibatsira kuti tirambe takabatana neshamwari uye mhuri, nekutipa nzira yekugara tichikurukurirana patinenge tichifamba. Uyezve, nharembozha dzinogona kutibatsira gara uine hutano uye unokodzera, nekutipa ruzivo uye maturusi ekutevera edu kufambira mberi kwehutano uye zvinangwa.
Ndeipi yakanakisa aesthetic countdown app?
Ndeipi yakanakisa inonzwika countdown timer app?
Ndeipi yakanakisa sobriety countdown app?
Ndeipi yakanakisa anime countdown app?
Ndeipi yakanakisa uremu kuverenga pasi app?
Ndeipi yakanakisa faceaway countdown dig app?